Manni murtii Federaalaa Oromoo saddeet irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooManni murtii Federaalaa Oromoo saddeet irratti hidhaa waggaa 6 olii murteesse
(OMN)– Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa olmaa Adoolessa 26, 2013 ooleen, himatamtoota galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman keessaa himatamtoota saddeet irratti murtii adabbii waggaa ja’aa hanga ja’aafi walakkaa itti murteessuusaa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tasfaayee Mokonnon Toleeraa OMN-tti himaniiru.
Manni murtichaa kanaan dura himannoo shororkeessummaa Abbaan Alangaa isaanitti baneef osoo murtee hin laatin dura, himatamtoonni faccisa akka dhiheefataniif ajajus, keyyatni abbaan murtii ittiin adabuuf ibsee ture faccisa dhiheessuuf barbaachisaa waan hin taaneef mormii afaanii qofaaf of qopheessanii akka turan Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tasfaayeen himaniiru.
Haa ta’u malee manni murtichaa beellama guyyaa har’aa irratti, keeyyata duraan ibsee ture dogoggora jechuudhaan keeyyata waggaa 10-18 nama adabsiisuun akka murtii kennuuf qophaa’e dhaddacha irratti ifoomsuusaa OMN odeeffateera.
Bu’ura ibsa keeyyata kanaanis manni murtichaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti adabbii dabarsuusaa kan himan Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tasfaayeen, himatamtoota kanneen keessaa namoota sadii irratti adabbii waggaa ja’aa, namoota shan irratti adabbii waggaa ja’aafi ji’a ja’aa dabarsee jira.
Hidhamtoota siyaasaa Oromoo murtiin adabbii hidhaa itti darbe kunniinis, himatamaa 3ffaa, 4ffaafi 6ffaa kan ta’an, Toleera Dagaa, Lalisaa Fiqaaduufi Daawit Muluu yoo ta’an, hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti adabbii hidhaa waggaa ja’aa itti murteessee jira.
Himatamaa 11ffaa, 13ffaa, 14ffaa, 16ffaafi 17ffaa kan ta’an, Abdii Dhaabaa, Malkaa Wiirtuu, Amaanu’eel Beekata, Biqilaa Garbaafi Gadaa Roobaa ammoo adabbii hidhaa waggaa ja’aa irratti dabarsuusaa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tasfaayeen himaniiru.
Galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himatamanii kan turan himatamtoota digdama (20) yoo ta’an isaan keessaa Koloneel Gammachuun beellama yeroo darbee irratti biliisa jedhamanis yeroo ammaa kana bakki isaan itti hidhamanii jiran hin beekamu.
***Ilmaan Oromoo ogeessi seeraa kan keessatti argamu irratti murtiin darbe.***
Keelloo: Hagayya 2,2021
Olmaa mana murtii Itoophiyaan kan Caffee Tumaa har’aan ilmaan Oromoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa wajjiin hidhamanii turan irratti murtiin hanga 6 olii darbe
Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti dararaa argaa turan kunneen keessaa namoota sadii murtiin waggaa 6 fi baatii 6 kan itti murame yoo ta’u, namoota kaan ammoo waggaa 6 itti muramuu isaa Keelloon odeeffate.
2. Lelisa Fiqaaduu
3. Daawit Mulluu jedhaman kanneen murtiin waggaa 6 fi ji’a 6 irratti murteeffame ta’uu isaa mirkaneeffanne.
1. Abdii Dhaabaa
2. Malkaa Wiirtuu
3. Amaanu’eel Beekata
4. Biqilaa Garbaa
5. Gadaa Roobaa kanneen ta’an irratti ammoo murtiin Waggaa 6 har’a murteeffameera jedhame.
Malkqa Wiirtuu ogeessa seeraa wayiita ta’u magaalaa Amboo keessaa qabamee hidhamuu isaa gabaafamaa ture. Ilmaan Oromoo kunneen yakka raawwataniin alatti murtiin dabaa itti murtaa’uu isaa odeeffannee jirra.
Dargaggoo Amaanu’eel Beekkataa nama kanaan dura wayiita aangoo olaanaa TPLF of harkaa qabaataa turtettis Qeerroo dha jedhamuun mana hiraarsaatti dararamaa turuu isaa mirkaneeffanne jirra.
Murtiin Wiixata har’aa ilmaan Oromoo kanatti murame murtii dabaa ta’uu isaa odeeffanneerra.
Suuraa: Malkaa Wiirtuu fi Amaanuu’eel Beekkataa miidiyaa hawaasaa irraa